Faa'iidada isku duubnida
Abuu Mansuur Al-amriiki oo si rasmi ah u shaaciyay inuu isaga baxay Al-shabaab.
on September 03 2013 Cumar Hammami oo sidoo kale loo yaqaano Abuu Mansuur Al-amriiki islamarkaana ah nin u dhashay dalka Mareykanka kana tirsan Xarakada Al-shabaab ayaa shaaca ka qaaday inuu isaga baxay ka mid ahaashiyaha Al-shabaab iyo Al-qaacidda.
Wareeysi uu siiyay laanta afka soomaaliga ee VOA ayaa wuxuu ku sheegay inuu gebi ahaan isaga baxay ka mid ahaanshiyaha ururadaasi uu hore uga tirsanaa, islamarkaana uu haatan ku dhuumaaleysanaayo keymo ku yaala gobolada Bay iyo Bakool.
Abuu Mansuur Al-amriiki ayaa sidoo kale sheegay inuu gebi ahaan xiriirkii u jaray hogaamiyaha Xarakada Al-shabaab, Mukhtaar Abu Subeyr oo loo yaqaano Axmed Godane, kaas oo uu sheegay inuu naftiisa kala baqaayo.
Waxaana uu sheegay in ciidanka Axmed Godane ay afduubteen laba xaas oo uu isaga qabay, isagoona hadalkiisa ku daray in sidoo kale la dilay nin guri siiyay xaasaskiisa.
Abuu Mansuur Al-amriiki oo kasoo jeeda gobalka Alabama ee dalka Mareekanka ayaa sanadkii 2006-dii soo galay dalka Soomaaliya, halkaasi oo u ku biiray dagaalyahanadda Xarakada Al-shabaab oo dagaalada aadka u xoogan kula jira dowladda Soomaaliya iyo kuwa garabka siinaya.
Dowladda Mareekanka ayaa hore lacag dhan 5 milyan oo dollar dul dhigtay qofkii soo sheega xog horseedaysa in lagu soo qabto Cumar Hammami oo loo yaqaano Abuu Mansuur Al-amriiki.